तिनी कैयाफाकी आफन्त थिइन्‌ | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन काजाक किकुयु किन्यारवान्डा किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मले मालागासी माल्टिज म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ वोलाइटा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिलिगेनोन
कहिलेकाहीं पुरातत्त्वविद्हरूले बाइबल पात्रकै विषयमा कुँदिएका वस्तुहरू भेट्टाएका छन्‌ भने कहिलेकाहीं बाइबल पात्रसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विषयमा कुँदिएका वस्तुहरू फेला पारेका छन्‌। उदाहरणको लागि, सन्‌ २०११ मा इजरायली शास्त्रविद्हरूले एउटा समाचार प्रकाशित गरे। त्यो समाचार बाइबल पात्रको आफन्तको विषयमा कुँदिएको अस्थिबाकस फेला परेको सन्दर्भमा थियो। कलात्मक रूपमा बनाइएको उक्त चूनढुङ्गाको बाकस २,००० वर्ष पुरानो थियो। त्यसमा लास कुहिसकेपछि राखिएका अस्थिहरू थिए।
त्यस अस्थिबाकसमा यस्तो कुँदिएको थियो: “बेथ इम्रीका माज्याह दलका पुजारी कैयाफाका छोरा येशूआकी छोरी मिरियम।” येशूको पुर्पक्ष र मृत्युदण्डको मामिलामा यहूदी प्रधान पुजारी कैयाफा मुछिएका थिए। (यूह. ११:४८-५०) इतिहासकार फ्लेभियस जोसेफसले ती प्रधान पुजारीलाई “कैयाफा भनिने यूसुफ” भनेका छन्‌। त्यो अस्थिबाकस सम्भवतः ती प्रधान पुजारीका आफन्तको हुन सक्छ। यसअघि फेला परेको अस्थिबाकस ती प्रधान पुजारीको हो भनेर अनुमान लगाइएको छ। त्यसमा “यहोसेफ बार कैयाफा” अर्थात्‌ कैयाफाका * छोरा यूसुफ भनेर कुँदिएको छ। त्यसैले मिरियम कैयाफाकी आफन्त थिइन्‌।
पुरातात्त्विक अवशेषसम्बन्धी इजरायली निकायले (आइ ए ए) दिएको जानकारीअनुसार मिरियमको अस्थिबाकस पुरातन चिहानबाट चोरी भएको थियो। त्यस हस्तकला र त्यसमा कुँदिएका शब्दहरूको जाँचले त्यो मिरियमकै अस्थिबाकस हो भनेर पुष्टि गर्छ।
मिरियमको अस्थिबाकसबाट हामी अर्को कुरा पनि बुझ्न सक्छौं। यरूशलेमको मन्दिरमा पालैपालो सेवा गर्ने पुजारीहरूको २४ दलमध्ये अन्तिम दल “माज्याह”-बारे पनि त्यस बाकसमा उल्लेख गरिएको छ। (१ इति. २४:१८) आइ ए ए-ले बताएअनुसार उक्त बाकसमा कुँदिएका शब्दहरूले “कैयाफा परिवार माज्याह दलको थियो” भनेर प्रस्ट पार्छ।
साथै त्यस बाकसमा बेथ इम्रीबारे पनि उल्लेख गरिएको छ। बेथ इम्री भन्ने शब्दलाई दुई तरिकामा बुझ्न सकिन्छ। आइ ए ए-अनुसार “पहिलो सम्भावना, बेथ इम्री भन्ने नाम पुजारी परिवार अर्थात्‌ इम्मेरका परिवारको (एज्रा २:३६, ३७; नहे. ७:३९-४२) नाम हुन सक्छ, जसको सन्तानमा माज्याह दलका सदस्यहरू पनि पर्छन्‌।” “दोस्रो सम्भावना, [बेथ इम्री] मृतक मिरियमको अथवा तिनको सम्पूर्ण परिवारको जन्मभूमि हुन सक्छ।” जेहोस्, मिरियमको अस्थिबाकसले बाइबल पात्रहरू वास्तविक हुन्‌, काल्पनिक होइनन्‌ भन्ने प्रमाण दिन्छ।
^ अनु.3कैयाफाको अस्थिबाकसबारे जनवरी १५, २००६ को प्रहरीधरहरा (अङ्ग्रेजी), पृष्ठ १०-१३, “येशूलाई दोषी ठहऱ्याउने प्रधान पुजारी” भन्ने लेख हेर्नुहोस्।
बाइबलको ऐतिहासिक सत्यता बाइबल तथा इतिहास
शेयर गर्ने शेयर गर्ने तिनी कैयाफाकी आफन्त थिइन्‌
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण फेब्रुअरी २०१३
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण फेब्रुअरी २०१३
राजा दाउद अस्तित्वमा थिए भन्‍ने पुरातात्त्विक प्रमाण